UMsunduzi wenza ngakho kwezokuvakasha – Msunduzi News
NGALESI sikhathi isifundazwe iKwaZulu-Natal sisemalungiselweni okubamba umhlangano omkhulu wemboni yezokuvasha i-Tourism Indaba ngomhla zi-2 kuya mhla zizi-4 kuNhlaba, uMsunduzi uyaqhubeka nokwenza izinhlelo ezicija imiphakathi ekubeni yingxenye yokuthuthukiswa komnotho wendawo. Kulokhu uMasipala ubambisene noMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho Ezokuvakasha Nezemvelo (Edtea) usingathe iTourism Entrepreneurs and Careers Expo ethathe izinsuku ezimbili mhla zili-13 kuya zili-14 kule nyanga.
Abebenikwe inkundla kulo mbukiso bekungamalungu omphakathi nezikole zendawo. IMeya ikhansela uNjilo yenganywe nguSihlalo weKomiti leSustainable Development uNkk u-Eunice Majola, iMeneja yakwaTourism kulo Mkhandlu uNkk uGugu Mvelase bebekhona ukuzokwelusa ukwenzeka kwalo msebenzi. IMeya uNjilo uphawule ngokujabula kwakhe ekuthini ulwazi lwemboni kanye namathuba akuyo ludluliselwe kubantu abasezikoleni nokuzothi uma sebephuma bakwazi ukukhetha into asebenolwazi lwayo.
“Ngiyajabula ngoba sezifundisiwe ukuthi babona kugcwele ezindaweni zobumnandi ezinjengo-033 Life Style, babone kufakwe namabhodi ayalela izindawo zobumnandi, namabhodi ayalela izindawo zobumnandi, baxakeke ngoba abachazelekile ukuthi kahle kahle zinomthelela omkhulu ekuthuthukisweni komnotho wedolobha. Nabo qobo uma sekufike isikhathi ngalolu lwazi bangazenzela amabhizinisi athi bona,” kusho iMeya.
Kanti uzakwabo iKhansela u-Eunice Majola uthe: “Ukusingathwa kwalolu hlelo eMsunduzi mina ngibona kusizakala uphiko iLocal Economic Development kanye nophiko iTourism engijutshelwe ukuthi ngikweluse. Nginesifuso sokuthi kungabi uhlelo oluzophelela nje kepha luqhubeke. Izinhlelo ezinjengalezi akumele ziphele ikakhulukazi lapha eMsunduzi ngoba siyiNhlokodolobha abantu kumele bazibone izinhlelo ezinjengalzi zenzeka eMsunduzi ukuze bakhuthale ukuyivakashela kanye nokuhweba.”
OyiMeneja Yezokuvasha uNkk uMvelase uthe lolu hlelo lungelokuqala ukuthi lwenzeke eMsunduzi namaphethelo. “Inhlosongqangi yalolu hlelo ukuqwashisa abafundi besikole ngamathuba akhona kwimboni yezokuvakasha, kungaba imisebenzi kanye nokungena ebhizinisini. Ngezakhamizi uthe ezabe zizokuzuza kakhulu ngokuba nohlelo olunjengalolu eMsunduzi ukuthi bathole ulwazi bese bangene embonini bakwazi nokuziphilisa. Uqhube ngokuthi ezokungcebeleka ziyawufukula umnotho wedolobha umakungukuthi uqashwe kahle yilabo abanikwe igunya lokulawula.
Kubafundi abebekhona injabulo ibibhalwe emehlweni. UNks uNqobile Mabaso owenza ibanga le-11 eNjoloba Secondary School othenge ubuhlalu obenziwe nguNkk uSbongile Mkhize, uthe into emhlabe umxhwele ngalobu buhlolu buhlukile kunalobu abujweyele, futhi uzokwazi ukuthi ahlobe ngabo uma esedle ingqephu.
“Ngikhethe ukubuthenga ngoba ngiyazigqaja ngokuba nguMzulu kanti ngizohloba ngabo maku nemicimbi yesintu, kanye nangelanga lokugujwa kwamagugu,” kusho uNqobile.
Ngakolunye uhlangothi uNkk uMkhize uthe “Ngimbonga kakhulu uHulumeni ngokusicushisa, nangokusikhumbula njalo uma kunezinto ezinjengalezi nje, ngoba ibona basazisayo baphinde futhi basilekelele ekutheni sikwazi ukudayisa nangokukhangisa ngempahla esinayo. Sihlomule ngezinkulungwane ezili-R15, emncintiswanweni iFestival of Beads, nathi sasingazitsheli ukuthi soke sithole imali engaka ngobuhlalu nje ngoba into ethatheleka phansi, kwasayithina sasiyenza nje ngoba siyakwazi sasingazi ukuthi singaze sifake isaka lempuphu ekhaya ngako,” kusho uNkk uMkhize.
Uqhube ngokuthi uhlezi engazisoli uma ezokhiswa uMasipala ukuthi bayobonisa ngoba usethole abantu ababekisile abevile eshumini, abazothenga impahla yakhe. Wathi ukuqhubeka kwabo ekuthengiseni ubuhlalu ubone kungcono ukuthi akhulise ibhizinisi baqashise nanangemvunulo khona ezokwazi ukwakha inkence eningi.
Madodakazi engabadi: Umzabalazo uyaqhubeka
Previous post: Ukoma kwamadamu kukhonga kukhulu
Next post: Nakulokhu iNhlokodolobha ingusokhaya ofanele